Ramen ကစလို့ sashimi အဆုံး ဂျပန်စာအမျိုးစုံကို တနေရာထဲမှာစားကြမယ် – FoodiesNavi
Ramen ကစလို့ sashimi အဆုံး ဂျပန်စာအမျိုးစုံကို တနေရာထဲမှာစားကြမယ်
By fairy On March 12, 2018 0
ခုနောက်ပိုင်း ရန်ကုန်မှာနိုင်ငံတကာကအစားအသောက်ဆိုင်တွေ ပေါများလာတာနဲ့အမျှ ဂျပန်စာဆိုင်တွေလည်းအများကြီးရှိလာပါတယ်နော်။ ဂျပန်စာလို့ပြောလိုက်ရင် sashimi, sushi နဲ့ ramen တွေကိုပြေးမြင်ကြတယ်ဟုတ်?? ဆိုင်တွေဘယ်လိုပဲများလာများလာ ကိုယ်စားချင်တဲ့ဟာနဲ့သူငယ်ချင်းတွေစားချင်တဲ့ဟာ အကြိုက်မတူလို့စိတ်ညစ်နေကြရတယ်မလား??
Seafood မစား၊ဆူရှီမကြိုက်တဲ့ အက်မင်ဆို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဂျပန်စာသွားစားကြမယ်ပြောတိုင်းအမြဲပြဿနာတက်ရတယ်။ ခုတော့ အားလုံး အဆင်ပြေသွားမယ့် ဂျပန်ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်တွေ့ထားလို့ ရန်မဖြစ်ရတော့ဘူးလေ….
အရသာကလဲ တကယ့်ဂျပန်အရသာအပြည့်အဝပေးနိုင်ပြီး စားကောင်းတဲ့အပြင် ဈေးကလဲအရမ်းမကြီးဘူးဆိုတော့ ပျော်ပြီလေ…. နေရာကလဲ အင်းယားကန်ဘောင်နားမှာပဲဆိုတော့ ဘာထပ်လိုသေးလဲနော့.. စားမယ်သောက်မယ်.. လမ်းလေးလျှောက်ပြီးလေညှင်းခံကြရုံပဲလေ………
ဆိုင်လေးက ကန်လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ ဂျပန်စာတွေအမျိုးစုံအောင်ရတဲ့ဆိုင်လေးတစ်ခုဖြစ်ပြီး နာမည်လေးက Tenri Ramen Restaurant တဲ့…
ပထမဆုံးမှာထားတဲ့ Ebi Katsu Teishoku ?ဆိုတဲ့ set တစ်ခုလာချတဲ့ချိန်မှာ မီဆိုးဟင်းရည်ကိုမြည်းကြည့်လိုက်တာနဲ့ ဒါဂျပန်အရသာစစ်လားမစစ်လား ကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတာကို တခါတည်းဆုံးဖြတ်လို့ရသွားပါတယ်။ set ပွဲမှာပါတဲ့ ပုစွန်အကြီးကြီးသုံးကောင်ကလဲ ရှယ်ကြီးပါပဲ။ အက်မင့်သငယ်ချင်းဆိုမစားနိုင်လို့ ပုစွန်တစ်ကောင်ကျန်နေခဲ့တာ နှမြောလို့မဆုံးဖြစ်နေရ။ အက်မင်က ပုစွန်မစားလို့ကူမစားပေးနိုင်ခဲ့ဘူးလေ..?
ပြီးတော့ ဂျပန်ဆိုင်ရောက်တိုင်းမစားမဖြစ်တဲ့ Gyoza ?လာချတော့ ၂ပွဲတောင်ဆရာ.. မှာထားတာတစ်ပွဲထဲကိုမှားပြီးလာချတာလားလို့ ချဲတော့မလို့ကို သူက တစ်ပွဲကလက်ဆောင်ပါဆိုလို့ လျှောချလိုက်ရတယ်..? (နှစ်စကတည်းကခုထိ ၁ပွဲဝယ်၁ပွဲလက်ဆောင်တဲ့နော်…) gyoza စားကောင်းချက်ကတော့ အိမ်ရောက်တဲ့ထိကို အဲ့အရသာလေးကိုငြိမိနေတုန်းပဲ…ပူပူလေးနဲ့ အထဲကအစာလေးတွေအရမ်းကိုစားကောင်းပါတယ်။
ပြီးတော့ အက်မင့်အကြိုက်ဆုံး Curry rice ?လာချတော့ အနံ့လေးကမွှေးလွန်းလို့ဆာနေတဲ့ ဗိုက်တောင် အသံပိုမြည်လာသလိုခံစားလိုက်ရ။ Curry ကထောပတ်နံ့လေးကိုသင်းနေတာပဲ၊ တစ်ခုပဲပြောစရာရှိတာက အာလူးကသိပ်မနူးညံ့ပဲ စပ်တောက်စပ်တောက်ကြီးဖြစ်နေသလိုခံစားရတာပါ။ စစချင်းတော့ ထမင်းကနည်းတယ်လို့ထင်ရပေမယ့် set မှာပါတဲ့ Korokke လေးစားလိုက်တော့ အတော်ပဲဖြစ်သွားတယ်။ ကြက်ဉလေးတောင်မကုန်လိုက်ဖူးရယ်….?
ပြီးတော့ အဆုံးသတ် မှာထားတဲ့ သောက်စရာအကြောင်းပြောပြရအုန်းမယ်။ အက်မင် သောက်နေကျ iced lemon tea ကတော့ တကယ်ကိုစိတ်တိုင်းကျမိပါတယ်။ တော်ရုံဆိုင်တွေမှာဆိုရင် ကိုယ်မျှော်လင့်ထားမိတဲ့ ပုံစံနဲ့ သူတို့ချပေးတဲ့ အရသာကတလွဲဖြစ်တတ်တာမျိုး ခဏခဏကြုံနေရတာလေ။ Lime honey juice ကလဲ အသီးတွေဘာတွေမခိုထားပဲ ရေခဲတောင် ၂/၃တုံးလောက်ပဲပါတာရော..
ဒါကတော့ အက်မင်တို့စားခဲ့တာလေးတွေပါ၊ set တစ်ပွဲစီနဲ့ gyoza တစ်ပွဲစီလေးပဲစားရတာတောင် အက်မင်တို့မှာ ဗိုက်ကိုပြည့်အင့်သွားတာဖဲ?
ဆိုင်က Ramen ကစပြီး ဆူရှီနဲ့ဆာရှိမိအပြင်တခြားဂျပန်စာတွေတော်တော်စုံအောင်ရပါတယ်။ Ramen ဆိုရင်လဲဆယ်မျိုးလောက်ရှိပြီး stamina ramen ကတော့ အဟာရတွေအပြည့်အဝပါတဲ့ သူတို့ရဲ့ အဓိကခေါက်ဆွဲပါတဲ့။ menu တွေများလွန်းလို့အေးဆေးကြည့်ရအောင် အောက်မှာထည့်ထားပေးမယ်နော်။
ဝန်ဆောင်မှုကလဲ မဆိုးပါဘူး ၈/၁၀ ပေးပါတယ်။ သိချင်တာရှိရင်သေချာဖြေပေးတာမျိုး အနားကနေဘာလိုတာလဲဆိုတာမျိုးတွေကြည့်ပေးနေတာမျိုးလဲရှိပါတယ်။ ဆိုင်က ညနေဆိုရင်လူကျပေမယ့် ပိတ်ရက်နေ့လယ်ဖြစ်နေတော့လူရှင်းနေလို့ အေးအေးဆေးဆေးစားသောက်ခဲ့ရပါတယ်။ Standard လဲရှိပြီး အစားအသောက်လဲကောင်းတော့ လုပ်ငန်းသဘောအရတွေ့ဆုံတာမျိုးတွေနဲ့ မိသားစုလိုက်အေးဆေးအချိန်ဖြုန်းချင်တဲ့သူတွေနဲ့တော်တော်သင့်တော်တာမို့လို့ ညွှန်းပေးချင်ပါတယ်။ ထိုင်ခုံအခင်းအကျင်းကလဲ table, high table နဲ့ ဂျပန်ထိုင်နည်း(ကြမ်းပေါ်) ကြိုက်တဲ့ခုံရွေးထိုင်လို့ရပါသေးတယ်နော်…..
ကဲ စားကောင်းသောက်ကောင်းစားရရင်ချစ်တဲ့သူတွေကိုသတိရတတ်တာသဘာဝမို့ foodies ချစ်သူလေးတွေကိုလဲ စားစေချင်မိတာကြောင့် ဒီ ဆိုင်လေးအကြောင်းကိုလက်တို့လိုက်ပြီနော်….
Tenri Ramen Restaurant facebook
No. 15, Kan Street, Hlaing Township, Near Clinique de Skin
In Reviews Tagged Japanese Food, remen Leaveacomment
နန်းထိုက်တော်ဝင်တဲ့အပြင်အဆင်တွေနဲ့ အာရှအစားအစာတိုက်ကြီးလို့ တင်စားနိုင်တဲ့ Asia House Restaurant………